FBSသည် အင်ဒိုနီးရှား မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကလပ်နှင့်အတူ လိုက်ပါခဲ့!
ယခုပွဲမှာ လူတိုင်းForex ထရိတ်ဒါဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို သက်သေပြနိုင်လိုက်သည့်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါသည်. Harley-Davidsonဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ မော်တိုင်ဆိုင်ကယ်သမားကတောင် ထရိတ်ဒါလုပ်နိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါ.! 😉မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနယ်လှည့်ပြီး ပရဟိတအတွက်အလှူခံထွက်သည့်ပွဲကို စီစဉ်ခဲ့သူ ကျွန်တော်တို့၏ ပါတနာဖြစ်သူAlek L Setiawanနှင့်တွေ့ဆုံလိုက်ပါ.
FBSအင်ဒိုနီးရှားနှင့် Forum Motor Besar Indonesia (FMBI) တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့သည့် ယခုပွဲမှာ FBSတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထရိတ်ဒါပေါင်း ၅သန်းပြည့်သည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နိဝင်ဘာ ၁၇မှ - နိုဝင်ဘာ ၁၉၇က်နေ့အထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနှံ့မှ ဆိုင်ကယ်ချစ်သူများနှင့်အတူတကွ - Malang မှ Baliအထိ - FBSအလံစိမ်းများတပ်ဆင်ကာ ခရီးရှည်မောင်းနှင်ခဲ့ကြပါသည်. ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများအတွက် လမ်းတစ်လျှောက် အလှူငွေများပါ ရရှိခဲ့ကြပါသည်. ထိုသို့ ပွဲမျိုးကို FBSက အစဦးဆုံးလုပ်ဆောင်ပြခဲ့တာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါတော့သည်.
FBSအဖွဲ့သားများအနေဖြင့် ကွန်ယက်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို နည်းလမ်းအစုံကို အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ကောင်းမွန်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကြည်နူးပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများကို ဖန်တီးခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်ကို သိရှိထားပါသည်! ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုလိုက်ပြီး FBS၏ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများကို စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ.